February 2012 - IT-KOKO
Brokeback Mountain Vs Lesbian Mountain
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, February 28, 2012
နှစ်ကားလုံးကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အချစ်ကားတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ဘာတင်ရင်ကောင်းမလဲမသိလို့ အသစ်အဆန်းလေးတင်လိုက်တာ။ GMovie vs LMovie 😛 Brokeback Mountain Lesbian Mountain
How To Remove The Haha Foto Virus
“haha foto http://bit.ly/y148EP?Facebook.com-IMG404366.JPG” ဆိုပြီ gtalk မှာ ခောတ်စားနေတဲ့ Virus ကို အောက်ကနည်းနဲ့ ရှင်းလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့ကို virus ပို့နေတဲ့ သူတော်တော်များလာလို့ အခုလို ပိုစ့်တင်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီလင့်ကနေ Malwarebytes ကို Download လုပ်ပါ။ Portable version download လုပ်ရန်။ ပြီးရင် Install လိုက်ပါ။ Install လုပ်ပြီးရင်တော့ Update လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ full scan လုပ်လိုက်ပါ။ virus တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးကို delete လုပ်လိုက်ပြီးရင် Restart လုပ်လိုက်ရင် အားလုံးအိုကေသွားပါလိမ့်မယ်။ မသေချာသေးရင် restart လုပ်ပြီးရင် နောက်တစ်ခါ scan လုပ်လိုက်ပါ။ Note: ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Malwarebytes …
Box offer 50GB free cloud storage
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, February 25, 2012
Box က ဒီနေ့ Update ဖြစ်ပြီးတော့ Android user တွေကို Free Storage 50GB ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးအတွက်ရမှာဆိုတော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ တစ်ခြား Dropbox, Minus တိုလို invite လုပ်မှ Storage Space တိုးလာတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Android သုံးသူတွေကို ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှစပြီး နောက်ရက် ၃၀ အတွင်း အကောင့်လုပ်သူတွေ အားလုံးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင် အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေလည်း Update လုပ်ပြီးရင် 50GB ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Android User တွေ ဘားမှတွေးမနေပါနဲ့တော့ အခု သွားပြီး အကောင့်လုပ်လိုက်ပါတော့။ Android Market ကနေ download လုပ်ရန်။ Apk လိုချင်သူများအတွက် download | …
MyanmarKeyboards for iOS5
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, February 23, 2012
MyanmarKeyboards for iOS5 ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နေ့တုန်းကတည်းက ထွက်နေတာပါ. ကျွန်တော် အခုမှ အားလို့တင်နိုင်တာပါ။ Keymagic Developer Thant Thet ကရေးထားတဲ့ Keyboard နှင့် ကိုမိုးစက် ရေးထားတဲ့ Zawgyi Keyboard ပါ။ နှစ်ခုလုံးကို သွင်းချင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ iDevice ကို jailbreak လုပ်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ကိုသန့်သက် ရဲ့ MyanmarKeyboard ကို အရင်ပြောပါ့မယ်။ Free မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Jailbreak လုပ်ထားရင် Keyboard ကို သွင်းလို့တော့ရတယ်။ သုံးဖို့ဆိုရင်တော့ Registration code လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ ရန်ကုန်က ဝယ်ရင် ၆၅၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သွင်းပုံသွင်းနည်းကတော့ မူရင်းလင့် မှာ …
Pic & Me (Site under Construction!)
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, February 21, 2012
ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံ ဆိုဒ်တစ်ခုကို မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ စတင်ဝင်လို့ ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်နာမည်ကိုတော့ Pic & Me (www.picandme.me) ဆိုပြီး Domain တစ်ခုဝယ်ထားပြီးပါပြီ။ WordPress မှာဘဲတင်ဖို့များပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး လုပ်ရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားရသေးလို့ WP-Countdown Theme တစ်ခုကို တင်ထားပါတယ်။ အခုတော့ စာမေးပွဲရှိတာရော၊ မအားတာရော ကြောင့် Theme ကို ကောင်းကောင်းမလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်မယ်၊ စိတ်တိုင်းမကျရင်တော့ သူများရေးထားတာကို Modify ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့။ Photography Site ဆိုတော့ Gallery ကိုကောင်းကောင်းလေး လုပ်ချင်တယ်။ Portfolio ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ Localhost မှာတင်ပြီး ရေးနေတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရင် ရန်ကုန်ပြန်မယ်၊ ခရီးသွားမှာဆိုတော့ အချိန်တော့ …
Testing mobile wordpress:-D
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, February 18, 2012
This post is just for testing. I had installed wordpree for android on my Galaxy Tab last few weeks ago. I did not much posting from mobile as i am not lazy to open my laptop. But for today, I am too lazy to open my laptop try to use my Galaxy Tab intead of …
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, February 16, 2012
Paungku Facebook App တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်သိနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ယူနီကုဒ် သုံးထားတဲ့ မြန်မာ အဘိဓာန် တစ်ခုပါ။ တော်တော်များများ စကားလုံးတွေရှိပါတယ်။ Idioms တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပုံပါတော့ ကိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ကနေ မြန်မာကိုဘဲ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ၊ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ Facebook မှာ ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Application တွေအများကြီးရှိသေးပါတယ်။ Facebook ဟာ Social Network တစ်ခုထက်ပိုပြီး သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Ornagai ပါ။ သူကတော့ iPhone မှာလည်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Web မှာပိုသုံးဖြစ်တယ်။ မြန်မာ−အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလိပ်−မြန်မာ နှစ်မျိုးလုံးရပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ကူပြီး အင်တာနက် ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ …
Best Photographic Composition Techniques Part #2
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, February 11, 2012
အပိုင်း ၁ Rule of Thirds ကို ရေးပြီးပါပြီ။ Active Space အခုနောက်တစ်ခုကတော့ သွားလာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အရာတွေကို ရိုက်တဲ့အခါမှာ သိထားသင့်တဲ့ အယူအဆလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Active Space ကိုပြောချင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး ပုံတွေမှာဆို ကိုရိုက်ချင်တဲ့ အရာကို rule of thirds နဲ့ချိန်ပြီး ရိုက်လို့ရပေမယ့် ပြေးနေတဲ့ပုံ၊ သွားနေတဲ့ မော်တော်ကား၊ စတဲ့ ရွေ့နေတဲ့ အရာတွေကို ရိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Active Space ကို သိထားဖို့လိုပါပြီ။ Active Space ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရိုက်မယ့် အရာက ရွေ့နေတယ်ဆိုရင် ရွေ့နေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မူတည်ပြီ နေရာလပ် ချန်ထားဖို့ကို ပြောတာပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကောင်းလေးတစ်ယောက်ပြေးနေတာကို ရိုက်မယ် သူကရှေ့ကိုပြေးနေတော့ …
Best Photographic Composition Techniques Part #1
ကျွန်တော် အခုတလော Photo ရိုက်ဖြစ်တယ်။ မရိုက်တာကြာလို့ ပြန်ရိုက်တာ။ သူငယ်ချင်းအဖော်တွေလည်း ပါတော့ ပျော်ပျော်ကြီး ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။ ကျွန် အရင်တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Composition Methods တွေက ပြန်ရှာပြီး ဖတ်လို့မရတော့လို့ အခုမြန်မာလို ပြန်ပြီးရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် Composition Methods အားလုံးကို မရေးတော့ဘူး။ အဓိကကျတဲ့ ဟာတွေကိုဘဲ ရေးပါ့မယ်။ Rule of Thirds အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Rule of Thirds ကို အရင်ပြောချင်ပါတယ်။ ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းကို ရိုက်ချင်တဲ့ အရာ(အဓိက ရိုက်ချင်တဲ့အရာ) ကို ပုံရဲ့ အလယ်မှာ ထားပြီးရိက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အလယ်မှာမထားဘဲနဲ့ ဘေးနားမှာထားပြီး ရိုက်တာဟာ လူ့မျက်လုံးကို ပိုပြီးဖမ်းစားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုပြချင်တဲ့အရာကို အလယ်မှာထားပြီးရိုက်တာဟာ …